Ankadivoribe : maherin’ny 50.000 ireo mponina hahazo famatsian-drano | NewsMada
Ankadivoribe : maherin’ny 50.000 ireo mponina hahazo famatsian-drano
Natomboky ny filohan’ny Repoblika Rajaonarimampianina Hery ny tetikasa famatsian-drano fisotro madio any amin’ny kaominina Ankadivoribe, distrikan’Antananarivo Atsimondrano ny alatsinainy teo.
Tetikasa AEP volavolain’ny minisiteran’ny Rano ary tanterahin’ny Jirama ity hatao any Ankadivoribe ity. Maherin’ny 50.000 ireo mponina hahazo tombony amin’ity famatsian-drano ity raha ny vinavinan’ny minisiteran’ny rano hatrany.
Amin’izao fotoana, mbola ny reniranon’i Mandroseza no mamatsy ny kaominina Andoharanofotsy sy Bongolava iny. Efa tena feno anefa ny fantson-drano ary tsy maharaka ny famatsiana intsony ny reniranon’i Mandroseza ka izany no hitadiavana vahaolana hafa hahafahana mamatsy ny mponina ara-dalàna.
Mitentina 4.817.435 Ar ny tetibidin’ny fanamboarana ity famatsian-drano vaovao ity izay mahazaka rano 120 m3 isan’ora. Afaka mamatsy hatrany Amboanjobe, Mahalavolona, Mandrimena, Iavoloha, Ankadivoribe izany fotodrafitrasa izany rehefa vita. Haharitra 11 volana ny asa izay hiainga avy amin’ny fisintonana ny reniranon’i Sisaony.
Nampanantena ihany koa ny filoham-pirenena fa hisy ny fanatsaran amin’ny famatsiana herinaratra amin’ny alalan’ny Jirama ao Ankadivoribe. Hatsaraina hatao “pavée” ihany koa ny lalan-dratsy mampitohy an’Andoharanofotsy sy Ankadivoribe.
Nohavaozina ny eny Mandroseza
Ny alatsinainy teo ihany, natomboka ny asa fanamafisana ny famatsian-drano etsy Mandroseza. Tanjona ny fanatsarana ny famatsian-drano ho an’ny mponin’Antananarivo. Hotanterahina ao anatin’ny fito volana ny asa.
Nampitandrina fatratra ireo manao fanorenana tsy ara-dalàna eny amin’ny manodidina ny fotodrafitrasa eny Mandroseza ny minisitry ny rano. Nanao antso avo tamin’ireo manam-pahefana eny ifotony ihany koa ny filoham-pirenena amin’ny fandraisana andraikitra fa tsy hiandry lava ny fanjakana amin’ny fampandrosoana ny tanàna.